Kilalao Marevaka Avo Lenta China Manufacturers & Suppliers & Factory
Kilalao Marevaka Avo Lenta - mpamokatra, orinasa, mpamatsy avy any Shina
(Total 20 vokatra ho an'ny Kilalao Marevaka Avo Lenta)
Porofom-bozaka avo lenta ho an'ny Roadmarking pihetseham-po avo be izay miorina eo amin'ny 100% mivantana felam-bozaka mivantana Miaraka amin'ny teknolojia maoderina, dia manamboatra sy manome ny kalitaon'ny vatosoa avo lenta isika amin'ny vidiny ambany mba hihaonana ireo fangatahana amin'ny...
Fiara miboridana miloko marevaka marevaka avo indrindra
Fiara miboridana miloko marevaka marevaka avo indrindra Famaritana momba ny perla fanosotra tsy misy loko Vorona vita amin'ny goro (Glass Bead) dia be dia be noho ny toetra tsy manam-paharoa amin'ny fanadiovana metaly amin'ny metaly na fatrana fanatsarana ny fikarakarana, indrindra ho an'ny fitaovana...
Vola marevaka avo loko marevaka Mba hanamorana ny faharetan'ny glasy vita amin'ny glasa ary hisorohana ny fialany amin'ny loko rehefa miparitaka amin'ny fiara, ireo kofehy ireo dia rakotra miaraka amin'ny lamosina manokana mandritra ny dingana famokarana mba hampitombo ny adhesion eo amin'ny...
Kilalao fanakam-peo avo lenta
Kilalao fanakam-peo avo lenta Glass Beads standards: 0.8-1mm 1-1.5mm 1.5-2mm 2-2.5mm 2.5-3mm 3.5-4mm 4-4.5mm 4-5mm 5-6mm 6-7mm Ny Kitapo Glass dia manamboatra singa mahavariana ny toetra ara-batana sy ara-tsika izay tsy misy vokatra hafa. Ny kofehy vita amin'ny vera dia manana endri-pifaliana tonga lafatra sy...
Amboaran-jiro matevina avo roa heny amin'ny haisoratra
Didy roa vita tamin'ny rongony Nandritra ny famokarana kofehy tsy tapaka, dia nanangona azy ireo tamin'ny karazana varahina isan-karazany mba hampitombo ny endriky ny hain-trano sy ny adhesion, mba hahafahan'izy ireo mitombo ny faharetan'ny perla sy ny fandinihana. Ireo kofehy vita amin'ny hoditra...
Ireo fitaovana fanalehibiazina avo lenta ny jiro mitaratra fandrefesana
Ireo fitaovana fanalehibiazina avo lenta ny jiro mitaratra fandrefesana Ny endriky ny kofehy izay fehezina mandritra ny dingana famokarana dia ahitana ireo izay zavatra simika sy ara-batana. Ny singa simika sy ny vatan'ny kavina dia manana fiantraikany goavana amin'ny fomba ahafahan'ny jiro mitaratra ny...
Hira felam-boninkazo marevaka marevaka
Hira felam-boninkazo marevaka marevaka Ity karazana giro ity dia vita amin'ny fanaka manokana vita amin'ny rongony. Ny mari-pandrefesana faktiora dia eo anelanelan'ny 1.57 sy 1.60. Ny fahaiza-mandanjalanja tsara kokoa dia ambony noho ireo glasy vita amin'ny gilaika ara-panandramana miaraka amin'ny...
EN1423 / EN1424 Tora-kofehy marevaka vita amin'ny rongony
Kitapo fehiloha ho an'ny fanoratana lalana (EN1423 / EN1424) Type Size Range Beads Retained(%) EN1424 355-1180um 1180um 0-2 1000um 0-10 850um 5-20 600um
Toro-làlana mareva-doko marevaka ravina fanenitra alina
Didy roa vita tamin'ny rongony Nandritra ny famokarana kofehy tsy tapaka, dia nanangona azy ireo tamin'ny karazana varahina isan-karazany mba hampitombo ny endriky ny hain-trano sy ny adhesion, mba hahafahan'izy ireo mitombo ny faharetan'ny perla sy ny fandinihana. Ireo kofehy ireo dia rakotra fanafody...
Fehezam-boninkazo avo be
Fehezam-boninkazo vita amin'ny hoditra Akanjo fitaratra fitaratra amin'ny karazana loko manokana mandritra ny famokarana mba hampitombo ny fatran-jiro amin'ny labozia. Ny hafanana dia tsy hifikitra eo amin'ny tendron'ity karazana glasy ity mora amin'ny toe-javatra misy ny andro rain'ny...
Fehezam-boninkazo haingon-koditra avo lenta
Fampidirana ny vokatra hosodoko vita amin'ny hoditra Perles Glasses Reflective Nandritra ny famokarana ny loko, ireo kofehy vita amin'ny vera vita amin'ny hazam-bary dia hampifangaro azy ireo ho toy ny ampahany maromaro takiana amin'ny fenitra. Ny ampahany vita amin'ny vera gasy dia halefa...
Kitapoopy miboridana avo lenta
Kitapo mason-tavoahangy Intermix ho an'ny marika fanenoman-damba
Nandritra ny famokarana ny loko, ireo kofehy vita amin'ny vera vita amin'ny hazavana dia hampifangaro azy ireo ho toy ny ampahany maromaro takian'ny fenitra. Ny ampahany vita amin'ny vera vita amin'ny verbe dia ho ripaka mandritra ny fampiasana loko eny amoron-dalana, izay nifangaro tamin'ny...
EN1423 Glass Beads ho an'ny Famolavolana Thermoplastic Painting
Ny pensilihazo mamaritra ny mari-pamantarana Thermoplast dia amina sary sokitra vita amin'ny synthetic, glass beads, pigments, fitaovana famonosana, fanampiny, sns. Ny hodi-kevitry ny synthetic dia manana ny plastika, mametraka haingam-paty mafana sy matevina mafy amin'ny lalana eny amoron-dalana. Ny...
taratasy fanamarinana: ISO 9001/ISO 14001/CE
ChiYe Glass Bead (Hebei) Co., Ltd, izay natsangana tamin'ny taona 1998, no mpamatsy lehibe sy be mpanolotsaina amin'ny gorodona mirindra amin'ny fiarovana ny arabe. Ny orinasa dia manana tsipika fananganana labozia 28 ho an'ny famokarana divay vita amin'ny gaza miaraka amin'ny output 100,000MT....
Kilalao fanondronam-bozaka matevina
Fanodinkodinam-bozaka fanenomana: 0.8-1mm 1-1.5mm 1.5-2mm 2-2.5mm 2.5-3mm 3.5-4mm 4-4.5mm 4-5mm 5-6mm 6-7mm Ny Kitapo Glass dia manamboatra singa mahavariana ny toetra ara-batana sy ara-tsika izay tsy misy vokatra hafa. Ny kofehy vita amin'ny vera dia manana endri-pifaliana tonga lafatra sy tsara tarehy....
Kitapo mason-tavoahangy sandika ho an'ny machine sandblasting Maka entona mandevina izy io satria ny hery hamoronana fiarabe haingam-pandeha mba hitifirany jiro vita amin'ny fitaratra amin'ny sehatry ny asa izay miteraka fanovana eo amin'ny habeny sy ny endriky ny asa. Noho ny fiantraikan'ny...
Porofom-bozaka marevaka matevina ho an'ny haingam-pandeha
Fehezam-boninkazo vita amin'ny hoditra Ireo kofehy vita amin'ny hoditra manokana amin'ny famokarana kofehy fitaratra. Ao amin'ny toetran'ny orana sy mandia, ny hatsikana dia tsy afaka mijanona mora foana amin'ny rindrin'ny gorodona, noho izany dia hampihenana ny fiantraikany amin'ny...
Fonosana kilaometatra / thermoplastic Premix BS6088A Glass Beads
High Retro-reflection Double-coated pads for Roadmarking
Kilalao Marevaka Avo Lenta Kilalao marevaka avo lenta Porofo marevaka avo lenta Porofom-bato marevaka avo lenta Vola marevaka avo loko matevina Bibilao marevaka marevaka Pikantsary marevaka matevina Porofo matevina avo lenta